Course Detail - PAÑÑĀ Online School
Making Coconut Shell Handicrafts
လက်မှုပညာဖြင့် SME လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းသူများ၊ လက်မှုအနုပညာ စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Faculties : U Soe Wai Linn
Commitment :2Hrs 47 Mins
အုန်းသီးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းငယ်လေးများ အနေဖြင့် Export အဆင့်မီ Value Added ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်လာစေခြင်း၊ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ ဝင်ငွေတိုးတက်စေခြင်း၊ အုန်းသီး Supply Chain ကောင်းမွန်ရေးအတွက် အုန်းမျိုးသစ်များ ဆက်လက်စိုက်ပျိုး၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ခြင်းစသည့် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အုန်းသီးကုန်ကြမ်းမှ အိမ်တွင်းအလှဆင် လက်မှု အနုပညာ ပစ္စည်းများအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိအောင် စက်ဖြင့်၊ လက်ဖြင့် ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် များကို လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဤသင်ခန်းစာသည် Online မှ သင်ကြားသော Vocational Training ဖြစ်သောကြောင့် Certificate ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
02. အုန်းသီးကို လက်ဖြင့် ဖြတ်ခြင်း
03. စက်ဖြင့် ဖြတ်ခြင်း
04. အုန်းသားထုတ်ပြီ Polငsh တိုက်ခြင်း
05. စက်ဖြင့် အတွင်းစားခြင်း
06. အသုံးပြုကော် များမိတ်ဆက်ခြင်း
07. မြေဆီဖြင့် အရောင်တင်ခြင်း
08. ဆေးဖြင့် အရောင်တင်ခြင်း နှင့် ပါကင်အိတ် ပြုလုပ်ခြင်း
09. အထောက်အကူပြု ပစ္စည်း ပြုလုပ်ခြင်း
10. အောက်ခံအထိုင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကော်ကပ်ခြင်း
11. အထိုင်ဖောက်စက် အသုံးပြုနည်း
12. ကော်ဖီခွက်ဒီဇိုင်းကို ကိုင်းတပ်ခြင်း
13. ဒိုင်းကိုင်ဖြင့် အုန်းသားဖြတ်တောက်ခြင်း
14. Electric Technic (Part 01)
15. Electric Technic (Part - 02)
16. ရေချိန်ကိုက်ခြင်း နှင့် ဆူးသွားဖြင့် အပေါက်ဖောက်ခြင်း
I'm Bhaumik Patel, I'm an iOS and WatchOS developer fluent in Swift and Objective-C. I'm the lead iOS instructor at the London App Brewery where we've taught over 900+ students in-person at our London classroom.
My first foray into programming was when I was just 12 years old, wanting to build my own video games. Since then, I've made over 70+ apps and some awesome games. In my courses, you'll find lots of geeky humour but also plenty of explanations and animations to make sure everything is easy to understand. I'll be there for you every step of the way.